African music (#6) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Mey 2019 7:30 GMT
Coupé-Décalé? Tsy nahita ambara aho rehefa nanontany ahy ilay vehivavy namako, Tchi, raha mba mahafantatra momba ny Coupé-Décalé. Fampidirana iray ao amin'ny wiki momba ny Coupé-Décalé no mitondra fanazavana fohy.
Hans avy ao amin'ny Powershot no mitondra fijery tsara momba ilay fetibe vao haingana WOMAD natao tao Adelaide, Aostralia tamin'ny Martsa. Nomarihany ireo fiakarana an-tsehatra maro nataon'ny Afrikàna tao amin'ilay fetibe:
Alasarona ilay seho faharoa, tanaty orana ny andro Alahady, nataon'i Lura, “Cape Verdean mpihira. Toa nifanaraka tsara tamin'ny ampaham-potoana farany natao ho azy ny fandihiny midoladola sy ny fiangaliny ny feony, nampiseho ireo endrika samihafa ananan'ny mozika avy any Cape Verde, miainga avy any amin'ny gadona milamindamina mankany amin'ny funk mafàna.”
Ny mozika Soukous fampandihizan'ilay Kongoley “Kanda Bongo Mans no nanokatra ny varavarana ho an'ny swing be voninahitra misy dindo aingam-panahy Kiobàna, nataon'ilay Orchestra Baobab manana ny lazany avy any Senegal izay nitazona gadona groove malefaka, manintona ary feno hafaliana. Ny fomba nilalaovan'izy ireo ny Coumba, avy amin'ilay CD Choice klasika an'ny Pirates, nohiraina tamin'ny fomba maharavoravo.”
Rohy mankany amin'ny bilaogin'i Steve Ntwiga Mugiri avy eo no azo (isaorana i Sokari) ary ny fampidirana farany avy aminy dia manome rohy misy mp3 iray mankany amin'ny Marina (sady manoratra aho eto no mihaino ihany), hiran'i Samba Mapangala. Manoratra bilaogy i Steve iresahany momba an'i Kenya, Afrika, ny mozika ary “ny tontolo misy antsika”. Raisiny ihany koa ireo fangatahana mp3 hampifandrohizina amin'ny bilaoginy, koa tsidiho ary dia mandraisa anjara amin'ny fety àry e.
Soul on Ice milaza momba ny fodiamandrin'i Nelly, tsy ela akory izay, mpikambana mpanorina ny tarika Tanzaniàna mpiangaly hiphop “X Plastaz”.
Tsidiho ny tranokalan-dry zareo ary mba asio sonia ilay boky fisaonana. Mandria am-piadànana
Red Ruin nanangona lisitra mp3 misy ireo hira hiphop erantany, nanasongadinana ny hira iray an'i X Plastaz , “Nini dhambi kwa mwenye dhiki“:
Manome fandikàna mahaliana momba ny fandaharana ireo mozika afrikàna i Soi Disantra:
Lovely Amphibian miresaka momba ilay Ogandey mpanakanto Ragga Dee nandrombaka ny Loka Perlan'ny Mozika ao Afrika ho an'ny mpanakanto Ragga tsara indrindra ho an'ny taona 2005:
Moistworks niverina nijery tahirinkira vitsivitsy an'ilay Afrikàna Tatsimo mpiangaly gadona Jazz, Johnny Dyani. Momba ilay hira “Song for Biko” dia manoratra izy hoe: